Home Wararka Doorashadii ugu tartanka adkeyd kuraasta Golaha Shacabka oo Maanta ka dhaceysa magaalada...
Doorashadii ugu tartanka adkeyd kuraasta Golaha Shacabka oo Maanta ka dhaceysa magaalada Baledweyne
Waxaa goor dhow lagu wadaa in magaalada Baledweyne ay ka dhacdo doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Baledweyne, kuwaas oo tartankooda aad u adag yahay.
Labada kursi ee Maanta doorashadoodu dhaceyso ee sida weyn indhaha loogu wada haayo ayaa kala ah HOP 011 iyo HOP 063, waxaana ku fadhiyay afartii sano ee la soo dhaafay Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo mar soo noqday wasiirka Amniga iyo Cabdullaahi Goodax Barre oo asna soo noqday wasiirka Waxbarashada, kuwaas oo maanta wajahaya loolankii ugu adkaa.
Kursiga HOP 063 oo Maanta doorashadiisa dhaceyso ayaa ah kursiga ugu tartanka adag, islamarkaana ay isku diiwaan galiyeen tiradii ugu badneyd ee Musharaxiin ah guud ahaan doorashada Golaha Shacabka, kuwaas oo gaaraya ilaa 9 Musharax oo ay ka mid yihiin Xildhibaan Goodax, Xoghayaha maamulka G/ Banaadir Xiireey, Xildhibaan hore Ibraahim Xabeeb, Duqa magaalada Baledweyne Nadar Tabaax, iyo musharrixiin kale oo saameyn leh.
Diiwaan gelinta halkaan kursi ee HOP 063 waxaa ku baxday aduun lacageed oo gaaraya 85,000 oo doolar, iyadoo sidoo kalana la sii sheegayo in Musharaxiinta lacago kale oo aad u badan ku bixinayaan sidii ay u dooran lahayeen ergada u codeyneysa, waxuuna sidaa ku noqonaya kursigaan kii ugu lacagta badnaa doorashadiisa inta la ogyahay guud ahaan doorashada kuraasta Golaha shacabka.
Kursiga labaad ee HOP 011, waxaa ku tartami doona isku diiwaan geliyay laba Musharax oo kala ah Wasiirkii hore ee Wasaaradda Amniga Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo kursigaan ku fadhiya iyo Maxamed Cumar Barrow (Maxamed Tuure).
Maamulka Hirshabeelle ayaa wali waxaa ku harsan doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo deegaan doorashadoodu kala tahay Baledweyne iyo Jowhar, xili waqtigii loogu talo galay in lagu soo gabagabeeyo doorashada aheyd 15-kii bishaan Maarso ee Maanta ah 22.
Previous articleEscape from Mogadishu review – Koreans bolt through Somali war-zone chaos
Next article(Xog) Kulankii Ictisaam ee Nairobi oo go’aano hordhac ah ka soo baxeen iyo isfaham guud
Muxuu udiidan yahay Madaxweynaha in doorasho waqtigeeda ku dhacdo
R/wasaare Abiy Axmed oo hambalyo u diray Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya...